Munaasabado Lagu Xusaayo 12-Ka Mowliid Oo Ka Socda Gobolada Dalka - Awdinle Online
Munaasabado Lagu Xusaayo 12-Ka Mowliid Oo Ka Socda Gobolada Dalka
November 9, 2019 (AO) –Maanta magaalada baydhabo iyo inta badan gobolada dalka Soomaaliya waxaa laga xusayaa munaasabadda 12-ka Mowliid oo ah maalintii uu dhashay Nabigeena Muxamed NNKH.
Munaasbaaddaan darteed ayaa waxaa magaalada baydhabo lagu dhajiyay boorar waa weyn oo lagu daabacay kalmadu lagu amaanayo rasuulka CSW.
Xuska maanta ee 12-ka Mowliid ee lagu qabanayo magaalada baydhabo waxaana ka qeyb gelaya sida qorshuhu yahay masuuliyiin dowladda ka tirsan iyo culumaa udiinka somaliyed
Dadweyne fara badan oo ka kala yimaada xaafadaha magalaadaa baydhabo ayaa ka qeyb gelaya xuska 12-ka Mowliid .
Wadooyinka magalada baydhabo waxaa gaar wareegaya gawaari lagu shiday qasiidoyin lagu amaanayo nabigeena maxamed NNKH.
Xuska maanta oo kale 12-ka Mowliid ayaa culumada qaar waxa ay ku sheegeen inay banaan tahay, halka culuma kalena ay ku sheegeen inaysan banaaneyn, balse waxaa badan inta aaminsan in maanta oo kale la weyneeyo dhalashadii Nabigeena Csw
Previous articleDhageyso :-Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Weerar Dhanka Afka Ku Qaaday Madaxdii Hore Ee Dalka
Next articleWafdi uu Haamiyano Wasiirka Boostada Iyo Isgaarsiinta Dowlada Dhexe Oo Gaaray Beledweyne :- (Sawiro)